Majalada France Football Oo Shaaca Ka Qaaday Xiliga La Bixin Doono Abaal Marinta Xidiga Aduunka Ugu Fiican Ee Ballon d’Or 2017. – WWW.Gool24.net
Majalada France Football Oo Shaaca Ka Qaaday Xiliga La Bixin Doono Abaal Marinta Xidiga Aduunka Ugu Fiican Ee Ballon d’Or 2017.
10/11/2017 Abdulkadir Dajiye
Majalada caanka ah ee Football Football ayaa ku dhawaaqday taariikhda ama waqtiga lagu dhawaaqi doono xidiga ku guuleysan doona abaalmarinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Or 2017. France Football ayaa hore u shaacisay liiska 30 ka ciyaartoy ee ku tartamaya abaal marinta Ballon d’Or kuwaas oo ay saxaafada ay soo xushay u codayn doonaan.
France Football ayaa bixin doonta abaal marinta Ballon d’Or oo markii 62 aad xidig kubbada cagta ah la gudoonsiin doono iyada oo sanadkii labaad oo xidhiidh ah si gaar ah u bixinaysa kadib markii ay sanadkii hore laba dariiq kala raaceen FIFA oo iyaduna gaar la noqotay abaal marinta The Best ee ay markii hore midaysnaayeen.
Majalada France Football ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in abaal marinta Ballon d’Or ee sanadkan la bixin doono maalinta December 7,2017 markaas oo si rasmi ah loo ogaan doono xidiga abaal marintan ku guulaysan doona. Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo muddo toban sano ah abaal marintan ku soo dagaalamayay ayaa markale ah labada xidig ee loo saadaalinayo.
Real Madrid ayaa liiska 30 ka ciyaartoy ee uu France Football hore ugu dhawaaqay ku lahayd ciyaartoyda ugu badan oo kala ah Marcelo, Sergio Ramos, Luca Modric, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo halka Gianluigi Buffon iyo Paulo Dybala ay ka socdaan Juventus, si la mid ah Luis Suarez iyo Lionel Messi oo Barcelona ka tirsan ayaa liiskan qayb ka ahaa.
Sidoo kale xidigaha kooxda Paris Saint-Germain Neymar Jr, Kylian Mbappé iyo Edison Cavani ayaa liiskan kusoo baxay, halka Jan Oblak Antoine Griezmann oo ka tirsan Atletico Madrid ay liiskan ku jiraan. David de Gea (Manchester United), Philippe Coutinho iyo Sadio Mané (Liverpool), Mats Hummels iyo Robert Lewandowski (Bayern Munich.) ayaa dhamaantood liiskan ku soo baxay.
Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard iyo N’Golo Kanté (Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Harry Kane (Tottenham), Radamel Falcao (Monaco), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) ayaa sidoo kale qayb ka ahaa liiska uu France Football hore u shaaciyay.
Laacibka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa kusoo guuleystay abaal marinta Ballon d’Or xili ciyaareedkii lasoo dhaafay wuxuuna markan doonayaa in uu barbareeyo rekoodhka Lionel Messi uu ballon d’Or ugu soo guulaystay shan jeer halka Messi uu doonayo in uu markii lixaad ku guulaysto.